Kedu agba kacha mma iji yie na ajụjụ ọnụ ajụjụ ọnụ ma ọ bụ ụbọchị mbụ? - Ụdị
Agba kacha mma iji eyi na ajụjụ ọnụ ajụjụ ọnụ, ụbọchị mbụ, na ndị ọzọ
A bịa na ụdị agba ọ ga -eyi mgbe (na ebe), enwere ọgụgụ isi dị ukwuu. A na -ekwu na odo na -eme ka obi dị gị ụtọ, ebe blues kacha mma ị nweta ma ọ bụrụ na ị na -enwe nrụgide. Ma mgbe enwere ọmụmụ ihe na-apụta n'azụ ihe a niile, enwekwara ọmarịcha elele nke echiche ọha. Ụlọ ọrụ T-shirt Britain nyochara ndị ahịa 1,000 iji chọpụta ihe ha chere gbasara ndị mmadụ n'ụdị agba na enwere ihe ịtụnanya ole na ole.
Uwe ojii Midi + tankị ọcha + ịnyịnya ibu dị warara
Agba kacha mma iji eyi na ajụjụ ọnụ
A na -akpọ ojii 'dị njọ ma bụrụkwa onye a pụrụ ịtụkwasị obi' ma chee na ọ bụ agba kacha nwee ntụkwasị obi (dịka pasent 48 nke ụmụ nwanyị na pasent 64 nke ụmụ nwoke). Dị ka nke a, wepụta noir mgbe ị nwere ajụjụ ọnụ ọrụ ma ọ bụ nzukọ dị mkpa gị na onye isi.
Agba kacha mma iji eyi na ụbọchị mbụ
Tụlee ime ka ọkụ na-acha ọbara ọbara na-acha ọbara ọbara ka ọ bụrụ ụcha ụbọchi abalị gị: pasent 56 nke ụmụ nwoke kwuru na ọ bụ nhọrọ agba ha kachasị elu na nwanyị, ruo mgbe ị matara nwanyị ahụ, enwere ike nwere ike igwu uwe gị.
Uwe ọcha + Blazer + Ụkwụ Ụkwụ-Ụkwụ
Nwanyị nwanyị nọ na Dior
Foto: Nwanyị nwanyị nọ na Dior
Agba kacha mma eyi mgbe ị na -asị 'Ọ dị m nwute'
Iji lee ịbịaru nso, mbibi, na enweghị mgbagha, tụlee ịtụgharị ụfọdụ ọcha (dị ka akpụkpọ anụ ọcha dabara adaba n'afọ niile). Agba ahụ dara na ala nke eserese mpako, na -anakọta naanị pasent 6 nke votu ahụ.
Ihe ngosi nzuzo nzuzo nke victoria 2016 lineup
Agba kacha mma iji yie ndị mmadụ nwere mmasị
Pink bụ ndò kachasị dị ala na ọgụgụ isi, yana obere pasent 5 nke ndị zara zara na -ekwu na ha ga -ewere onye na -eyi ihe ka onye nwere ọgụgụ isi. Were ya dịka ị ga -achọ, mana anyị na -eche na nke a pụtara ịchafụ dị nro ma ọ bụ ntụpọ poppy nwere ike ịbụ naanị ndò ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmasị ndị mmadụ na smarts gị - ọ bụrụ na ha ahụghị ka ọ na -abịa, ọ ga -adịrị ha mma. (N'ihe banyere iwepụ ike ụbụrụ, ahaziri n'usoro n'usoro: nwa, acha anụnụ anụnụ, ọcha, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, odo odo, aja aja, ọbara ọbara, odo, oroma, na pink).
otu esi eyi booties na jeans
usoro mgbochi ịka nká kacha mma maka afọ 50
otu esi edozie isi ihe ndị na -acha ọcha
egwu gbasara onye ị hụrụ n'anya merụrụ ahụ